तिमीसँग | BLOGSTREET
Posted on December 10, 2012 by Roopess	तिमीप्रति समर्पित छु म अनि मेरा शब्दहरु
‘सँगै’ बिताएका चार वर्ष
चार पल झैं गरी बिते।
कहिले घाम उदायो कहिले अस्तायो?
भर्खर पो बिहानी हुँदैछ!
साँझ त पर्दै नपर्ला!
यस्ता पलका जुनी जुनी तिमीसँगै काट्ने चाह
झलझली झन् झन् झुल्किंदैछ प्यारी!
One response to “तिमीसँग”	sushma thapa says:	December 10, 2012 at 9:41 PM	thank you so much ..